Obama oo Ruushka uga digay Ukraine - BBC Somali
Obama oo Ruushka uga digay Ukraine
1 Maarso 2014
Image caption Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa Moscow uga digay in uu cawaaqib ka dhalan doono faragelin lagu sameeyo Ukraine, xilli ay jiraan warar sheegaya in ciidamada Ruushka ay galeen gobolka Crimea.
Madaxweynaha mareykanka Barack Obama ayaa ka digay cawaaqibka ka dhasho haddii Ruushka uu militari ahaan u farageliyo arrimaha Ukraine.
Obama oo ka hadlayay aqalka Cad ee dalkaasi looga arrimiyo isla ka walaacsan dhaqdhaqaaqa militari ee ciidamada Ruushka ay ka dhex wadaan gudaha Ukraine ayaa sheegay in xadgudub kastaa oo lagu xadgudbo madaxbannaanida dhuleed ee Ukrauine ay ka dhalanayso xasilooni darri.
Waxa uu ku amaanay Ukraine sida ay u muujisay xasiloonida.
Gegi diyaaradeed oo lala wareegay Ukraine
28 Febraayo 2014
Dibedbaxyo iska soo horjeeda Ukraine
26 Febraayo 2014
Maraykanka oo Afghanistan ka soo baxaya